Chaarte hanafate babbaxxitino metidubba:
Calc woy borreessaanchu giddo bisiccubbatewiinni daatu kaiminni chaarte surki.
Buete daati soorramanno wote hakkuriu chaartuwa uminsanni yanneessantanno.
IGadete daatu qineessonni chaarte surki, nna aanchite chaartete umikki daata eate daatu hasaawa horoonsiri.
Hakuriu chaartubba borreesaanchu giddo kalaqama dandaanno dhageefati nna misilsi.
Chaatrte Calc woy borreessaanchuwiinni wole bortajera giddora galchi.
Kuriu chaartubba galchammete yannara daatu lipheessi qaphuwaati. Insano buete daati soorramanno yannara disoorrantanno.
Calc isipiriidishitte giddo chaarte giddo
Chaartekkira shiqisha hasirattota bisicote gidoyiidi hakka geeshsha kisi.
Uduunnigaxi aanaChaarte Surki margeessu bido kisi.
Chaartete balaxilacha nna chaartete kaa'laancho lai.
Chaarte kalaqate Chaartete Kaa'laanchi giddo hajajubba harunsi.
Borreessaanchu borro bortaje giddo chaarte
Borreessaanchu bortaje giddo, borreessaanchu shae giddo hornyuwate kaiminni chaarte surka dandaatto.
Borreessaanchu shae giddo kisi.
Surki - Uduunnichu - Chaartedoori.
Umise hornyuwi aana kaima assidhino chaarte
Chaartete aana lameegge-kisatenni nna aanchite Ilacha - Chaartete daatu Shaedooratenni gadete daati hornyuwa soorra dandaatto.
Title is: Chaartubbate surkamme